Akụkọ - Ihe ngosi Laser Sano
Sano Laser ụlọ ọrụ ịga Dubai, Spain, Italy, Turkey, Poland, na Romania ngosi kwa afọ.
Nke a bụ foto mgbe anyị gara India Ngosi. India bu ahia buru ibu na ulo oru anyi. Anyị nwere ọtụtụ ndị nkesa na India. Anyị na-abịakwa India ugboro atọ n’afọ.
Na Turkey ngosi, na diode laser, Skin oyi na picosecond Nd yag laser igwe bụ ndị kasị mma n'ire igwe. Anyị nwere onye nkesa nke diode laser na picosecond ND yag laser igwe na Turkey ugbu a.
Anyị nwere otu ndị na-asụ asụsụ Rọshịan n’ụlọ ọrụ m. Ha na-elekwasị anya na Ukraine, Russia na ahịa mba Russia. Ha na-abịakwa ịbịa ngosi ngosi Russia na Ukraine kwa afọ.
Hong Kong ngosi bụ mba ngosi, anyị na-aga a ngosi kwa afọ, na anyị nwere nnukwu ụlọ ndò na Hong Kong ngosi.
Na Poland, igwe IPL, Microneedle RF na igwe laser diode na-ere ọkụ.
Beijing Sano lasers S&T Co., Ltd. Bụ ọkachamara emeputa nke aesthetics & Medical laser igwe na China. Sano lasers nwere ya research & mmepe center, ụlọ ọgwụ, ahịa na mgbe-sales ngalaba; nwere ike inye nkwado teknụzụ ọkachamara na data ụlọ ọgwụ na nke mbụ. Anyị nwere ike ịdebe gị mgbe niile n'ọhịa mara mma, n'ihi ndị otu ọkachamara anyị na-etinye na ngwa anya, igwe, ọkụ eletrik na ọgwụ.
Kemgbe 2005, Sano nọgidere na-arụsi ọrụ ike ma nwekwaa ikike nke onwe nke ogige ntụrụndụ, nke karịrị 100,000.00m2, yana karịa ndị ọrụ 100. Ọzọkwa anyị guzobere ụlọ ọrụ alaka ụlọ ọrụ na Hong Kong. Anyị na-akụkụ na mba ngosi kwa afọ. Na mbọ, Sano lasers Company nwetara ọtụtụ asambodo ụlọ ọgwụ na nke mba maka ngwa ọrụ ya dị iche iche, dị ka (TUV) CE, (TUV) ISO 13485, FDA, Certificate; yanakwa ikikere mbubata na mbuputa asambodo, ikike maka ulo oru mmeputa ngwa agha na asambodo ulo oru di elu.
Na ndị ahịa na-orientated azụmahịa nkà ihe ọmụma na nzube nke sayensị na nkà na ụzụ mbụ, hụ elu àgwà na-eri-irè ngwaahịa maka ndị ahịa; nke na - eme ka anyị nwee ọtụtụ ndị ahịa n’ụwa niile. Sano lasers Company na-arụsi ọrụ ike oge niile, bụ ịghọ onye isi mba OEM / ODM na-emepụta ngwa ọrụ & ọgwụ niile dị n'ụwa.
Ọkachamara ọkachamara na-akwado:
Anyị nwere ụlọ ọrụ R&D nke mmadụ iri abụọ, otu ndị na - ere ahịa nke mmadụ iri abụọ na otu ụlọ ọgwụ nke mmadụ iri na ise. Anyị nwere ike inyere gị aka maka imepụta ọhụụ na ịzụlite, akwụkwọ ntinye akwụkwọ, yana idozi nsogbu gị. You nwere ike ịchọta anyị site na ekwentị, kamera na nkata n'ịntanetị site na enyemaka nke ngosi vidiyo na ihe osise. N'ezie, anyị nwere ike ịnye ọrụ enyemaka.
Nnọọ na China!
Nabata na Beijing!
Nabata Sano lasers!
Post oge: Mee-08-2021
Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Co2 Fractional Laser Machine, Shr Ipl Opt, otutu mwepụ mwepụ, Ems Akwara mkpali Machine, Ọrịa Co2 Laser,